Zenzeka kanjani izivunguvungu zesihlabathi nothuli? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Las isihlabathi nothuli izivunguvungu Ziyizinto ezingakholeki, futhi ziyingozi uma zikushaya. Banganciphisa ukubonakala kwamadolobha wonke ngemizuzu nje, futhi bathatha isikhathi eside ukunyamalala.
Uma ufuna ukwazi ukuthi zenziwa kanjani, ungasusi amehlo akho esiqapha njengoba sizochaza kabanzi ziyini futhi kungani kwenzeka lezi zivunguvungu ezikhethekile.
Iziphepho zesihlabathi nothuli azivamile ukusikhanga, ngoba ngokunciphisa ukubonakala, zidala ingozi enkulu emgwaqeni. Noma kunjalo, sibonga bona, amahlathi afana nalawo ase-Amazon anganakekelwa, ngakho-ke nabo banecala elihle kakhulu.
Njengoba isivunguvungu sesihlabathi asifani nesiphepho sothuli, sizokubabona ngokwehlukana:
1 Iziphepho zesihlabathi
2 Iziphepho zothuli
3 Zakhiwa kanjani?
4 Ungazivikela kanjani esivunguvungwini noma othulini?
Iziphepho zesihlabathi zakhiwa izinhlayiya zesihlabathi ezivela ezindaweni ezomile ezihlala ngaphezulu. Lapho ijubane namandla omoya lenyuka, lezi zinhlayiya ziqhutshelwa phezulu, ukwazi ukuhamba amabanga amade ngokuvundlile.
Amasimu lapho akhiqizwa khona kakhulu yiwo lapho cishe akukho zimila okunye, iqiniso elithanda izinhlayiya eziphakanyiselwa phezulu. Isibonelo, ogwadule lwaseSahara noma emathafeni aseNyakatho Melika, zivame kakhulu.
Umehluko omkhulu onazo lezi zinhlobo zeziphepho nalezo zesihlabathi isilinganiso sezinhlayiya ezimisiwe. Kulokhu, angaphansi kwama-microns ayi-100, okungukuthi, i-0'01000000cm, isici esivumela ukuthi sande kakhulu, sikwazi ukusenza sizwe ukuthi imvelo ingcolile. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yezici zabo, zivimbela ukwakheka kwamafu, ukuze imvula ezindaweni lapho zakha khona iyindlala kakhulu.
Indawo lapho zivela khona kakhulu yihlane laseSahara, lapho imimoya yezohwebo inesibopho sothuli olufinyelela ezweni lethu, ikakhulukazi ehlobo.
Ngokwakheka kwalolu hlobo lwezimo kuyadingeka ukuthi kube khona ifayela le- umehluko oshisayo phakathi komhlaba kanye nezendlalelo eziphakathi neziphezulu zomkhathi. Njengoba ubuso bomhlaba bufudumele, izindimbane zomoya kanye nothuli ezisuka kuwo, zingafinyelela emazingeni aphezulu e-troposphere. Kepha le nto ayigcini lapho, ngoba badinga lo moya ukuthi ushayisane nento ebanda kakhudlwana ukuze ikhuphuke iye phezulu kakhulu; futhi Yilokho umoya obandayo ovela ezingxenyeni eziphakeme zasemkhathini ozozinakekela..
Ngakho-ke, kufanele kube nohlelo olungaphambili endaweni enendawo efudumele futhi eyomile. Isistimu yomoya wangaphambili, njengoba ibanda, igudluza umoya ofudumele osegumbini, idale ukuthi ingcindezi ikhuphuke. Ngale ndlela, isivinini somoya naso siyanda, sizibeka phakathi kwe- 80 no-160km / h, kubangela isiyaluyalu. Amazinga okushisa angaphezulu, afudumele kakhulu, abangela imisinga ye-convection.
Izinhlayiya ngaleyo ndlela zingahlala zimisiwe emoyeni isikhathi eside.
Ungazivikela kanjani esivunguvungwini noma othulini?
Ukuba yizinto ezinciphisa ukubonakala, kufanele siqaphele kakhulu uma sithola i-. Noma ngabe uhlala endaweni lapho zivame khona noma uma zenzeka ngezikhathi ezithile, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi kufanele wenze kanjani ukuze uphume kuwo ungalimele.
Uma ushayela futhi ngokungazelelwe ubona udonga lwesihlabathi noma uthuli luza kuwe, ungenza izinto ezimbili:
Dlula kukhoinqobo nje uma ungafinyelela isivinini esiphezulu esivunyelwe ngaphandle kokubeka engcupheni noma ngubani.
Yima ekhoneni bese ulinda. Kuyindlela enconyelwa kakhulu, kepha futhi yiyona evame ukukhathazeka kakhulu, ngoba maduzane uzithola usongwe ngesihlabathi, futhi ngeke ubone lutho imizuzu embalwa. Ukuze uqiniseke ukuthi akukho okuzokwenzeka kuwe, jika ubheke ehlombe (noma okungcono, phuma emgwaqweni uma ukwazi), bese uvala amawindi.
Uma isivunguvungu sesihlabathi noma sothuli sikushaya lapho uhamba, into yokuqala okufanele uyenze ukubeka imaski emakhaleni nasemlonyeni wakho. Uma unayo, gcoba i-petroleum jelly emakhaleni akho ukuvimbela ukuthi zome.
Uma usuqedile, kufanele uvikele amehlo akho. Ukwenza lokhu, ungavikela ubuso ngengalo eyodwa, noma ugqoke izingilazi ezingangeni emoyeni. Kufanele wazi ukuthi amalensi avamile awavikeli kakhulu ezinhlayiyaneni; sebenzisa okungangeni moya kangcono.
Manje, kufanele ufune isiphephelo. Okunconywe kakhulu yi- ngena endaweni evulekile (okusho ukuthi, ivikela lapho umoya uza khona), njengasemuva kwezihlahla ezinde noma izihlahla zesundu; futhi noma nini lapho ungakhona, yiba endaweni ephakeme.
Futhi ekugcineni zivikele ezintweni ezisindayo ezingandiza zihambe. Zisize ubhaka wakho, noma usondele emhlabathini ngangokunokwenzeka.
Iziphepho zesihlabathi nothuli zingadala izinkinga eziningi, ngakho-ke kungcono uxwayiswe kusengaphambili. Lalela izixwayiso zesimo sezulu edolobheni lakho ukuze ungabanjwa ungazelele.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Zenzeka kanjani izivunguvungu zesihlabathi nothuli?
U-Adrián Rodríguez Areal kusho
Uyabona, angazi noma ngabe banakile yini; futhi uma lokhu kungafundwa yikhasi noma; kunalokho, abahleli bawo, ngincoma ukuthi wenze njalo, ngoba lokhu okushiwo kulo mbhalo kuyindlela efana neyendlu enkulu yesonto futhi futhi kuhambisana nemininingwane ngokombono wami; nokuqinisekisa okuhle kwekhasi uqobo; Uma kuhloswe ukuba kube lukhuni futhi kube nenhloso futhi kuthembeke ngangokunokwenzeka kanye nokushicilelwa kwayo, ngincoma ukuthi umhleli / abahleli banake okulandelayo:
Kulo mbhalo kubhalwe ukuthi umehluko omkhulu phakathi kwesiphepho sesihlabathi kanye nesiphepho sothuli ngumehluko phakathi kweziphethu noma izinhlayiya ezakha noma eziyimbangela yesiphepho esishiwoyo; esimweni sesiphepho se-polno, kuthiwa izinhlayiya zaso zenziwe ngothuli; Ngokuphambene nezesihlabathi, okuthi, njengoba igama labo likhombisa, zigutshuzelwe yisiphithiphithi noma ukuphazanyiswa kwesimo sezulu komoya okubangelwa ukufuduka kwenqwaba yomoya, okubangela ukwenyuka kwezinhlamvu zesihlabathi kanye nenqubo yonke. Kepha inkinga ukuthi lapho noma nini imininingwane yobukhulu bezingilazi zothuli ezibangela iziphepho zothuli inikezwa ireferensi yobukhulu; okukhombisa nokuqinisekisa embhalweni / embhalweni ngokucacile okuphelele, »okungokoqobo»: ukuthi izinhlayiya zothuli zisusa noma zinosayizi omncane kunama-microns ayi-100; noma yini efanayo, ama-micrometer ayi-100 ;m; ibhalwe ngohlamvu "mu" njengesiqalo sohlelo lwamanyunithi lwamazwe omhlaba; okukhombisa ukuthi ingaphansi kuka-0,1mm noma> 0,1mm; isilinganiso salo esilingana no-0,0001cm hhayi u-0,01000000cm njengoba kukhonjisiwe ekhasini futhi kushiwo nokuthi kuyafana. Okusho ukuthi iphutha lobukhulu be-stratospheric be-athikili ezenza ngathi isayensi. Futhi yini okubi kakhulu. Iphinde ihambisane namayunithi abalulekile ayi-7 ikakhulukazi ukuyinika ukuqina okukhulu; lapho konke ekwenzayo ngempela ukwenza isimo noma isitatimende esivezwe embhalweni sibe sibi kakhulu.
Phendula u-Adrián Rodríguez Areal